प्रदेश सरकारले दियाे संघीय सरकारलार्इ यस्ताे काउण्टर, संविधान त्रुटीपूर्ण छ, नव गठित पार्टीले के गर्छ अब? -
प्रदेश सरकारले दियाे संघीय सरकारलार्इ यस्ताे काउण्टर, संविधान त्रुटीपूर्ण छ, नव गठित पार्टीले के गर्छ अब?
४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०७:३९ 1179 पटक हेरिएको
जनकपुरधाम । प्रदेश २ को सरकारले मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमाथि बहस गर्नु औचित्यहीन भएको बताएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माअाेवादी हाल नवगठित नेकपा पार्टीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमाथि कुटनीतिक विपरीत भएकाे अाराेप लगाएकाे थियाे।
वैशाख २८ गते मोदी नेपाल भ्रमणका आएका थिए । त्यसक्रममा जनकपुरमा भएको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विभेदकारी संविधानविरुद्ध आफूहरु संघर्षरत रहेको बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले अन्तरिक कुरा विदेशी पाहुनासामू राख्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरित भएको भन्दै केन्द्र सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रदेशसभामा पनि मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्कै बहस भएपछि सरकारले जवाफ दिएको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले जनताको इच्छा र आकांक्षा अभिव्यक्त गरेको बताए । ‘जनताको भावना बमोजिम अभिव्यक्ति दिनु नेतृत्वको दायित्व हुन्छ । सोही दायित्व सम्झेर मुख्यमन्त्रीले लाखौं जनताका अगाडि आफ्ना कुरा राख्नु भएको हो, संविधानमा अझै त्रुटी र विभेदका कुराहरु छन् ।’